Gabriella Jumpsuit PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / Jumpsuits / Gabriella Jumpsuit PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
categories: Jumpsuits, အမြိုးသမီးမြား
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး GABRIELLA TUTORIAL here.
TOP: Copyshop အရွယ်အစား: 70စင်တီမီတာက x 62cm / A4 Pages: 12 / အမေရိကန်ပေးစာ: 12
TROUSERS: Copyshop အရွယ်အစား: 59cm x 199cm / A4 Pages: 24 / အမေရိကန်ပေးစာ: 24
WAISTBAND & CUFF: Copyshop အရွယ်အစား: 18.5cm X 130cm / A4 Pages:5/ အမေရိကန်ပေးစာ: 6
pin နှင့်ချုပ်. Top-stitch the seam allowances flat.
တွယ်အပ်, stitch and finish the side seam allowances.
Insert one TROUSER into another, အတူတူလက်ျာဘက်၌.
တွယ်အပ်, stitch and finish beginning at either centre front or back and continuing to the opposite center.
Align the raw edges of the CUFF to the end of the TROUSER leg. pin နှင့်အရပ်ဌာန၌ချုပ်. Finish the seam allowance as before.